चितवन पुगेर प्रचण्डले भने- 'पार्टी एकताको विषय भोलिसम्ममा टुङ्गिन्छ'
चितवन, १ फागुन -नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकताको विषय बुधबारसम्ममा टुङ्गो लाग्ने बताउनुभएको छ ।
आज यहाँ पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टी एकताको विषयमा आज वा भोलि टुङ्गो लाग्ने बताउनुभएको हो । पद बाँडफाँडका विषयमा पनि भोलिसम्ममा टुङ्गो लाग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिका–९ स्थित शरदपुर माध्यमिक विद्यालयको ४३ औँ वार्षिकोत्सव तथा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन आउनुभएका अध्यक्ष दाहालले ढिलोचाँडो आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनुभयो ।
देशको विकासका लागि तीन ठूला दलबीच आपसी समझदारीको खाँचो रहेको बताउँदै उहाँले तीन दलबीच समझदारी बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
फरक प्रसंगमा अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन समयमा गरिएको बृहत शान्ति सम्झौताले दुरगामी परिवर्तन ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो । नेपालमा भएको शान्ति सम्झौताले विश्वको ध्यान केन्द्रित गराउन सफल भएको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विद्यालयले निर्माण गरेको शिशु कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मको दुई तले नौ कोठे भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कृष्णप्रसाद भूर्तेल, मिलनबाबु श्रेष्ठलगायतले बोल्नुभएको थियो । रासस
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न– तत्कालै सहमतिमा फर्कने कि चौतर्फी दबाब पर्खने ?
बुटवलमा कांग्रेसको खबरदारी सभा, कहाँबाट आए हजारौं मानिस ?
वैकल्पिक राजनीतिको बहस : विचार मिल्नेसँग एकता गर्न डा. बाबुराम तयार
बुटवलबाट प्रदेश राजधानी दायाँ–बाँया हुन नदिने कांग्रेसको उद्घोष, सभामा उर्लियो भीड